Afaan-faajjii seenaa! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAfaan-faajjii seenaa!
Caalaa Hayiluu Abaataa tin, Bitootessa 2, 2019
Burjaaja’iinsi ayyaaneffanana guyyaa Adawaa waliin deemaa jiru afan-faajjii seenaa ti.
Lolli Aduwaa kan gaggeeffame bara 1896 yommuu tahu yeroo kanatti Oromoonni guututti kolonii Impaahera xoophiyaa jalatti akka hin hammatamne beekamaadha.
Wallakkaan Oromootaa yeroo saniyyuu qabsootti turan.Tarii Oromoon Giddugaleessaa lola bara dheeraa godhaa tureen injifatamee kaan oggaa gara obbolaa isaanitti gabrummaa jibbanii baqatan, kaanimmoo bitamuun hiree isaanii tahee sirna kana jalatti kufaniiru. Akka aknaanis namoonni tokko tokko loltuu Minilik ta’aniiru.Darbeemmoo waraana Goobanaa waliin kan turan isuma waliin Minilitti kennamaniiru.
Haa tahu malee Oromoon gama Arsii fi Harargee jiru madaan hafnaan dhiigni ilmaan Oromoo laga tahee yaa’aa ture iyyuu hin gogne ture. Lolli #Aanolee bara 1885-87 ture; akkasumas #CaliiCalanqoo bara 1887 ture, Lolli #Imbaaboo bara 1882 ture.Akkasumas Gullallee fi Sulultaa keessatti duguuggaan sanyii erga raawwatee waan turee miti. Egaa haala akkasii keessatti Oromoon akka abbaatti Aduwaa dhaqee biyya tiksuuf lole oggaa jedhan nama qaanessas, kijibas.
Ijoolleen Oromoo Adawaraatti hirmaatan sabboonummaa Xoophiyaa tiksuun deemanii laata moo hireetu muudatee jennaan? Dhugaadha namoonni akka dhuunfatti hirmaatan gootota turan.Kunis seenaa isaanii dhuunfati malee Seenaa Oromoo tahuu hin qabu.
Duguuggaa sanyii waggaa saddeet dura Arsii fi Calanqoo irratti gaggeeffamee tureefi waggaa 10 dura Gullaallee fi Sulultaatti raawwatee ture hoo akkamiin dhaadatuun egaa!
Seenaa haaraa hojjachuutu gaariidha malee seenaa madaa itti qabnu xuxxuuquun ittiin boonuf yaaluu fi kiyya jechuun qaanidha!
#Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana as biyya USA, Minesota’ jira-Taajjabbiinis gidduu ture.
Dhimma dhuunfaaf #Taajjabbii #Minesotatti ergeen ture. Utuun dhimma biraaf jooruun eebba waaajjira Quntsulaa bakka bu’a Xoophiyaa tokko utuu eebbisaa jiranii itti goreen arge; agruu namoota cidha waamamanii achi jiran hunda ilaaleen qopheessitoota sana taajjabee dhufe.
Minesotaan mormitoota jajjaboo akka hawaasaattis ta’e akka dhuunfaattis qabsoo OromoProtest’ warra oogganaa turantu keessa jiraata jedhamee amanama. Akka miidiyaatti gaazexeessitoonni OMN hundi isaanii jireenyi isaanii Minesota’dha. Akka hawaasaatti ammoo jaarmiyaan hawaasa Oromoo #Minesota’ baayyee jaboodha jechuun danda’ama. Biyya keessatti mootummaa sana mormuudhaan gabaasaalee gurguddaa iccita mootummaa Sanaa gadi baasuudhaan Oromiyaa keessaatti dhageettii guddaa kan horatan ijoollee jajjabduun Gaazexeessitoonni OMN hammi tokko bakka jiranitti namni dhaqee #Lammaa Magarsaafaa simatee keessummeesse, #Habashoota warra ‘Community’ Itoophiyaafi Oromoota warra durumaayyuu Muktar Kedir, Aster Maammoofi Abbaa Dyyuulaafaa jala fiigaa turaniifi kaardii OPDO wagga dheera duraa kaasanii qaban; warra fuulli isaanii qabsoo Oromoo keessaatti guyyaa tokko hinargamiin. Yoo argamanis warra aalbee qara lamaa. Warra wagga dheeraaf biyyatti ‘Business’ oofaataa ture; isaantu har’a lakkoofsa jijjiirratee achii as nutti deebi’e. Isa akkanaa warra akka Lammaa Magarsaafaa dhuguma jijjiiramni jira jennee akka nuti amannuuf, mormitooti jajjaboon kana dura miidiyaarratti isin mormaa turan, har’a cidha keessan keessa hinjiran yoo ta’e, ayyaan laallattuu bu’aa ofiif qofa fiigdu qofa ofitti marsitanii deemtu yoo ta’e, jijjiramni keessan fagoo isin hingeessu.
King of Kings – Prime Minister Abiy Ahmed’s Ambition in the 21st Century